कोपा अमेरिकामा किन खेल्दैछन् जापान र कतार? | Hamro Khelkud
कोपा अमेरिकामा किन खेल्दैछन् जापान र कतार?
एजेन्सी – जुनको तेस्रो सातादेखि ब्राजिलमा सुरु हुने कोपा अमेरिकामा १२ देशको सहभागिता रहेको छ । दक्षिण अमेरिकाको १० राष्ट्रसँगै यसपटक एसियन कपको फाइनल खेलेका जापान र कतारले पनि कोपा अमेरिकामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
दक्षिण अमेरिकामा १० राष्ट्र मात्र भएका कारण प्रतियोगितालाई उचित संरचना दिन दुई राष्ट्रलाई सहभागिता जनाउन आमन्त्रण गरिएको हो । यसअघिका प्रतियोगितामा ६ राष्ट्रलाई निमन्त्रणा दिने प्रचलन रहेको थियो । अमेरिकामा भएको अघिल्लो संस्करणमा पनि १६ टोलीको सहभागिता रहेको थियो ।